Inverter Factory - China Inverter abavelisi kunye nababoneleli
· ST inverter ukusebenza ingaphezulu kwe-85% · Uyilo olutsha, ukuziqhelanisa nobubanzi kunye nokuxinana kwamandla ombane, ukuqaphela ngokuzenzekelayo ukubonwa · Umboniso opheleleyo we-LED, umsebenzi we-inverter unokukhethwa ngokokusetyenziswa kwabathengi · Iindlela ezi-3 zokusebenza ziyafumaneka: izinto eziphambili ngokubaluleka, inverter ephambili, imo yokonga umbane · Ngaphezulu kwamaxesha ama-3 amandla okuqala aphezulu, amandla omthwalo ogqwesileyo · Umtshini okrelekrele (hlengisa ngokuzenzekelayo isantya sefeni ngokobushushu bangaphakathi) · Itekhnoloji yokuhamba kwamandla rhoqo, isinyithi sine wave AC ...
Uthotho lwe-EH9335 uthotho lwe-UPS luthathu, kathathu / ngaphandle kathathu kwi-UPS ephezulu. Umthamo wemveliso ugubungela lonke uluhlu lwamandla ukusuka kwi-20kVA ukuya kwi-80kVA, ekulungeleyo kubasebenzisi ukuba bamisele ngokuguqukayo. Olu luhlu lwe-UPS lunokusombulula phantse zonke iingxaki zamandla, njengokuphuma kombane, amandla ombane aphezulu ombane, amandla ombane wedolophu, ukuhla kwamandla ombane, ukuncitshiswa kwe-amplitude, iingxaki zamandla ezinje ngeempembelelo zombane eziphezulu, ukuhla kwamandla ombane, ukunyuka kombane, ukuphazamiseka kweharmonic, ukungqubana ukuphazamiseka, kunye nokuhla kwamaxesha.
I-EP2000 ye-inverter ye-series ye-inverter yindleko efanelekileyo, ekrelekrele nomsebenzi we-UPS. I-LCD ebanzi ibonelela ngoqwalaselo lomsebenzisi kunye nokuhlengahlengiswa ngokulula kwamaqhosha njengokutshaja ibhetri yangoku, umbane webhetri, imvamisa, ibuzzer njl.
Ilungele umsebenzisi odinga inverter elula neyoqoqosho, ngokufakelwa komsebenzisi kunye nokuseta.
Inqaba kunye noyilo lwe-rack ziyafumaneka kukhetho ezahlukeneyo.
Inverter yokwahlulahlula inqanaba EP3300 TLV uthotho, umthamo ovela kwi-1KW-6KW, DC 12V / 24V / 48V, uyasebenza kwiimfuno zeemarike ze-110VAC / 120VAC, ezihambelana nesigaba esinye se-AC 110VAC / 120V, okanye isigaba esinye se-110VAC / 120V 120V / 240V; Kwisiboniso seLCD, ungacwangcisa umbane wokuphuma, amaza ombane, ukutshaja ivolthi, ukutshaja ngoku ukuyila usetyenziso olululo ngokusekwe kwizicelo zemithwalo eyahlukeneyo; Okwangoku, unokuqhagamshela isilawuli kwitshaja eyongezelelweyo yelanga ukwakha inkqubo yekhaya yelanga, ukusebenzisa ukukhanya kwelanga ngokukhululekileyo kunye nokugcina amatyala ombane.
I-PV1800 Pro series-450v / 240v / 110v icime inverter yenkqubo yelanga
I-PV1800PRO yi-inverter / itshaja yemisebenzi emininzi, ukudibanisa imisebenzi ye-inverter, i-MPPT yeshaja yelanga kunye netshaja yebhetri ukubonelela ngenkxaso yamandla engenakuphazanyiswa kubungakanani obuphathekayo. Uthotho lwePV1800 Pro lunokuqhuba ngaphandle kwebhetri. Ubuninzi be-PV evulekileyo yombane wesekethe ovulekileyo unokufikelela kwi-500V, kwaye i-MPP yombane yi-150 ~ 450V, enokunceda abathengi basebenzise ngokupheleleyo amandla elanga
Le yi-inverter / itshaja yemisebenzi emininzi, ukudibanisa imisebenzi ye-inverter, MPPT50A / 80A itshaja yelanga kunye netshaja yebhetri ukubonelela ngenkxaso yamandla engenakuphazanyiswa ngobungakanani obuphathekayo. Ukuboniswa kwayo okubanzi kweLCD kubonelela ngokusebenziseka kweqhosha kunye nokufikeleleka ngokulula kwebhetri njengokutshaja ibhetri yangoku, i-AC / itshaja ephambili yelanga, kunye nevolthi yokufaka eyamkelekileyo esekwe kwizicelo ezahlukeneyo.
Uthotho lwe-PV3500 sisinxibelelanisi semisebenzi emininzi, esidibanisa imisebenzi ye-inverter kunye ne-MPPT t isilawuli kwitshaja yelanga, itshaja yelanga kunye netshaja yebhetri ukubonelela ngenkxaso yamandla engenakuphazanyiswa ngobungakanani obuphathekayo. Umboniso obanzi weLCD ubonelela ngokusebenziseka kweqhosha elinokusebenziseka kwaye lifikeleleke lula njengokutshaja ibhetri yangoku, i-AC / itshaja ephambili yelanga, kunye nevolthi yegalelo ekhethiweyo ngokusekwe kwizicelo ezahlukeneyo.